र र विपक्ष को डेटिङ एक विवाहित महिला
यात्रा डेटिङ साइटहरु लागि एक विवाहित नारी? के गर्दै छन् तपाईं को लागि देख? किन एक मानिस मिति एक विवाहित नारी? केही मानिसहरू लागि, यसको जवाफ छ, वास्तवमा, स्पष्ट छ: तिनीहरूले चाहनुहुन्छ बस प्राप्त गर्न खुशी छ । छन् जो मानिसहरू मा चासो हो डेटिङ विवाहित महिला, र तपाईं हुन सक्छ, तिनीहरूलाई को एक छ । यी मान्छे प्राप्त गर्न चाहँदैनन् दूर उनको परिवार देखि, तिनीहरूले बस द्वारा आकर्षित पहुंच र एक ठूलो इच्छा खान निषेध गरिएको फल हो । कहिलेकाहीं, यो यस्तो बलियो आकर्षण छ जब एक सुन्दर केटी मा देखिन्छ यो क्षितिज भन्ने छैन सबैलाई प्रतिरोध गर्न सक्छन् यो पनि भने, उनी विवाहित छ र तपाईं बारेमा सपना देख्यो कहिल्यै डेटिङ विवाहित महिला । यसको वाहेक, केही बालिका लाग्छ कि तिनीहरूले गुमाउन लागि अन्य मानिसहरू संग घन्टी मा आफ्नो औंला, तर, अक्सर, यो अवस्था विपरीत छ । पत्नी को एक राम्रो मित्र, एक समसामयिक जानकारी वा एक सहयोगी, केही मानिसहरू सहायता गर्न सक्दैन संलग्न भइरहेको डेटिङ मा एक विवाहित महिला । विचार को मायालु एक विवाहित महिला भरिन्छ यस्तो मान्छे संग एक अर्थमा को उपलब्द्यि र व्यक्तिगत.
तर, यो बन्न छैन, कम प्रासंगिक कारण छ कि. धोखा थियो, छ र हुनेछ, र तपाईं दूर देखि प्राप्त गर्न सक्दैन । तपाईं कुरा गर्न सक्छौं रूपमा धेरै तपाईं जस्तै यो छ कि को सार मानव प्रकृति र प्रयास गर्न सिकाउन साथी व्यवहार गर्न वास्तवमा को धोखा शान्तपूर्वक. यो गर्न आवश्यक छ भनेर भन्न, आजकल, धेरै दम्पतीले छन् के गर्ने भन्ने छ । तिनीहरूले प्रत्येक अन्य बताउन बारेमा आफ्नो प्रेम मामिलामा परामर्श, र पनि उपयुक्त साथी खोज्न को लागि आफ्नो साथी । यस्तो पति र पत्नी आफूलाई विचार गर्न मुक्त हुन र उन्नत मान्छे । शायद, यसको. तैपनि, को बहुमत परिवारको स्वागत यस्तो एक उन्नत स्तर । त्यो खुला प्रेम संग मामिलामा अन्य सहयोगी छैनन् स्वागत छ । तथापि, धेरै मानिसहरू संलग्न छन् डेटिङ मा एक विवाहित महिला । जे भए पनि, महिला धोखा छ यसको आफ्नै विशिष्टता छ । यो सुन्दरता, सबैभन्दा संभावना, छ एक व्यवस्थित विवाह, र यो जरूरी छैन संग, एक धनी मानिस कहिलेकाहीं तिनीहरू विवाहित प्राप्त गर्न कठिन-काम गर्ने मान्छे छन्, एक होनहार भविष्य । त्यो चाहन्छ स्नेह र स्नेह छ । त्यो हुन सक्छ, एकदम परिपक्व छ, र, त्यही समयमा, त्यो हुन सक्छ एक शानदार सुन्दरता, तापनि, सायद, उनको शरीर हुन सक्दैन भनिन्छ आदर्श छ । त्यो आकर्षित गर्न प्रयास गर्नेछ जो कसैलाई ड्र पनि एक ध्यान को किनभने उनको त्यो तत्काल आवश्यक भावनात्मक स्नेह, र त्यो यो हुनेछ कुनै पनि लागत मा. शायद, त्यो बनाउँछ तपाईं पनि उनको प्रेम पर्नु, तर यो महिला तपाईं छोड्न हुनेछ रूपमा चाँडै त्यो थकित हुन्छ. मिति एक विवाहित महिला, सोच्न सम्भव परिणामहरू मा अग्रिम । त्यो त एक नरमाइलो गृहिणी छ जो विवाहित बिना कुनै जीवन अनुभव, वा एक महिलाले गर्ने काम एकदम धेरै, र उनको पति उत्तेजित उनको छ । बरु लिएर एक छुट्टी वा भएको एक शौक, यो महिला लागि देख छ एक जवान केटा पक्ष मा छ । दुर्भाग्य, त्यो एक महत्वपूर्ण छ । भने, पहिलो प्रकार को विवाहित महिला छ, त्यसपछि यो महिला, विपरीत मा, हुनेछ लागि प्रतीक्षा, आफ्नो कार्यहरू मा सबै । कहिलेकाहीं, त्यो पनि छोड्न परिवार छोटो समय को लागि, तर त्यसपछि त्यो फिर्ता आउँछ । सम्झना कि त्यो विवाह छ, र त्यो छ खोजी लागि एक पाउनु कत्ति रोमाञ्चकारी डेटिङ, अन्य मानिसहरू । यो केटी बस विवाह. पतिले थियो शायद उनको पहिलो मानिस, र यो अनुभवहीन केटी हालै फेला बाहिर छन् भनेर पनि अन्य मानिसहरू । त्यो प्रेम, पति, कम से कम त्यो पागलपनको आज्ञाकारी उहाँलाई, तर यो सबै भन्ने तथ्यलाई कारण त्यो एक सभ्य अनुभव को कमी मा मामिला हो । एक कुरा, रक्सी को एक बोतल र एक सजिलो विश्वास छ कि सेक्स फरक हुन सक्छ, र यो आज्ञाकारी केटी छ, पहिले नै मा आफ्नो ओछ्यानमा । तर, अब तपाईं विश्वस्त हुनुपर्छ भन्ने उनको सबै रहनुपर्छ एक गोप्य छ । तपाईं पूरा गर्न सक्छन् यस्तो महिला एकदम अक्सर. त्यो निवेश उनको सारा जीवन मा विवाह, त्यो सबै गरे को लागि उनको पति र छोराछोरीलाई । त्यो थियो एक पटक राम्रो, तर त्यो हेर्न थाले उनको उपस्थिति कम छ । त्यो थकित पतिको किनभने उहाँले आफ्नै जीवन, तिनीहरूले सँगै बाँचिरहेका छौं बस किनभने विवाह एक पवित्र कुरा हो । कुनै एक उनको प्रेम, र यस्तो अवस्था उनको अत्यन्त छ । मा एक राम्रो तरिका, यो हुनेछ तार्किक प्राप्त गर्न तलाकशुदा, तर त्यो कहिल्यै लिन यस्तो कदम किनभने यो कदम छ गम्भीर छ । बरु, त्यो छ लागि खोजी प्रेम मा, यो पक्ष र त्यो बनाउन खोज्छ उनको प्रेमी हुन उनको नयाँ श्रीमान् बिना सम्बन्धविच्छेद, को पाठ्यक्रम. सामान्यतया, यस्तो मानिसहरू चाहँदैनन् एक गम्भीर सम्बन्ध देखेर, एक विवाहित महिला, र पक्कै पनि, सपना डेटिङ बारेमा एक विवाहित महिला संग बच्चाहरु । जे भए पनि, उनको नयाँ विवाह पनि विफलता गर्न छ । सम्बन्ध मा जो कम से कम एक साथी छ विवाह सधैं चुनौती छ । गाइड गर्न डेटिङ एक विवाहित नारी? तपाईं के प्राप्त हुनेछ अन्त मा: अधिक प्रेम वा समस्या? किन हो यस्तो सम्बन्ध लोकप्रिय अब? यसको यस्तो सम्बन्ध मा एकदम लोकप्रिय आधुनिक संसारमा । सामान्यतया, मानिसहरू परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ अवस्था, तिनीहरूले सन्तुष्ट छैन, सेक्स, तिनीहरूले एक संकट, वा तिनीहरूले चाहनुहुन्छ महसुस गर्न मनमोहक छ, र तिनीहरूले छैनन् गरेर आफ्नो प्रकृति । त्यसैले, तिनीहरूले खोज्न सुझाव गर्न डेटिङ एक विवाहित महिला ।. पहिलो र, शायद, सबैभन्दा कदर लाभ को कमी छ प्रतिबद्धता विवाह । एक नियम को रूप मा, को लागि आधार यस सम्बन्ध छैन एक उच्च अर्थमा प्रेम, त्यसैले महिला हुनेछ मांग को निर्माण विवाह संघ, त्यो पहिले नै यो छ । तपाईं एक हुनेछ विविध यौन जीवन । सबै भन्दा पहिले, विवाहित महिला अधिक गहन ज्ञान मा घनिष्ठ क्षेत्र, र दोश्रो, कुनै पनि महिला सधैं गर्न चाहन्छ आश्चर्य र खुसी उनको प्रेमी छ कि जसको अर्थ, प्रत्येक आफ्नो सभाहरूमा जस्तै हुनेछ अन्तिम एक: उज्ज्वल, हिंसात्मक, रोमाञ्चकारी र अविस्मरणीय छ । यसबाहेक, तपाईं पूरा गर्न सक्छन् आफ्नो बोल्ड, घनिष्ठ र सेक्स प्रयास मा असामान्य ठाउँमा, भूमिका-खेल खेल वा सेक्स खिलौने.
षडयंत्र मा यी सम्बन्ध छ मुख्य कुरा, र यसैले, त्यो पछि लाग्न छैन, उनको प्रेमी छ । मतलब कि तपाईं जीवन बाँच्न चाहनुहुन्छ, तपाईं परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन केहि, र तपाईं रूपमा काम बिना तपाईं चाहनुहुन्छ डर दाबी उनको पक्ष । त्यो गर्न असम्भाव्य छ कुरा सबैलाई उनको बारेमा सानो गोप्य किनभने त्यो पनि भइरहेको डराएका. यसैले, त्यो सबै गर्न प्रयास बनाउन यो सम्बन्ध गोप्य रहन. यो नै एक महत्वपूर्ण प्लस । विवाहित प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ. अर्को सकारात्मक पक्ष यस्तो प्रेम कामकाज छ कि एक विवाहित महिला माग गर्दैन विवाह गर्न उनको छ । कहिलेकाहीं, पाठ्यक्रम, यो हुन्छ, र तिनीहरूले मांग, तर तिनीहरूले त्यसो धेरै कम अक्सर भन्दा अविवाहित महिला । त्यो कम मांग छ । कसरी मिति गर्न, एक विवाहित महिला । केही अवस्थामा, यो एकदम सजिलो छ । उनको फूल वा छैन कि, तपाईं वर्तमान उनको एक उपहार को लागि एक जन्मदिन वा छैन, तपाईं गर्न सक्छन् पनि छैन बधाई उनको मा सबै, र यो छ सबै सही. पनि विशेष बहाना आवश्यक छैन किनभने तपाईं बस शंका हुर्काउन, पति को भनेर. साथै, तपाईं आफैलाई देखाउन रूपमा संवेदनशील र कमजोर मानिस । तपाईं कल छैन उनको लागि अक्सर एउटै कारण छ । यो ठूलो कुरा छ त्यो बनाउन छैन भन्छ कुनै पनि कारण बिना. तपाईं कम संभावना छ रोग छ । जोखिम रही यस्तो रोग हल्कासित छ संग सम्बन्ध मा एक विवाहित महिला । त्यो परिवर्तन हुनेछ साझेदार तीन पटक एक हप्ता र छैन संग सेक्स पहिलो. सबै भन्दा पहिले, त्यो समय छ, दोश्रो, यो खतरनाक छ । सबै पछि, त्यो एक पति. यो सम्बन्ध निर्माण बिना आपसी अवसरहरूमा शपथ खाएको र प्रतिज्ञा, केही साझेदारी गर्न, त्यसैले तपाईं को आवश्यकता हुनेछ एक कुराकानी गर्न ब्रेक अप. मुख्य कुरा गर्नुपर्छ भनेर सम्झना छ कि तपाईं के गर्न आवश्यक छ कि एक अर्थमा संग मर्यादा र, बाँकी एक मानिस र एक व्यक्ति । तपाईंलाई थाहा छ भने बारेमा केही सुविधाहरू हुनेछ भनेर अनुमति छैन तपाईं तोड शान्तिमा, त्यसपछि आफैलाई सोध्न, म गर्नुपर्छ मिति एक विवाहित महिला । र राम्रो. सम्भव जोखिम छ । तपाईं याद गर्नुपर्छ भन्ने बारे. छैन हरेक पति हुनेछ शान्तपूर्वक र बुझ्न पर्याप्त जानकारी छ कि आफ्नो पत्नी धोखा छ. सबैभन्दा अवस्थामा, उहाँले चाहनुहुन्छ सरोष सामना गर्न छ जो एक व्यक्ति छ आफ्नो पत्नी, र संग मात्र शब्दहरू संग तर पनि सक्रिय शारीरिक कार्यहरू । त्यसैले, या त सिक्न आत्म-रक्षा वा कसरी छिटो चलान । लगातार षडयंत्र । तपाईं को थकित प्राप्त, यो धेरै छिटो छ । र यदि यो ल्याउँछ सुखद उत्तेजना मा पहिलो, त्यसपछि यो मा बढ्न, र । तपाईं मात्र एक हुन् जो छ उनको संग सेक्स. यसको कठिन र धेरै अप्रिय, विशेष गरी जहाँ अवस्थामा एक महिला साँच्चै प्रिय र सुखद. प्रत्येक आफ्नो बैठक र एक महिला छोडेर घर चोट हुनेछ तपाईं दुखाइ. समस्या सिर्जना मा आफ्नो परिवार । यदि एक मानिस छ चाहनुहुन्छ एक पूर्ण- परिवार, त्यसपछि यो विकल्पले काम छैन. तपाईं समय बर्बाद गर्दै छ । केही मानिसहरू पनि त्यस्तै सम्बन्ध वर्ष को लागि, र तिनीहरूले प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ कि भनेर धेरै तिनीहरूले गर्न सक्षम छैनन् सिर्जना आफ्नै परिवार छ । प्रतीक्षा गर्दा आफ्नो प्रिय एक छोड हुनेछ पतिको पनि छैन, सबै भन्दा राम्रो आशा छ । अध्ययन देखाएका छन् कि मात्र महिला निर्णय परित्याग गर्न आफ्नो सामान्य जीवन । नतिजा । यसबाहेक एक संग उनको पति, तपाईं बन्न सक्छ सबै पछि समस्या लागि एक महिला: उदाहरणका लागि, सामाजिक बदला, भाग मा, छोराछोरीको चासो आमाबाबु दुवै पक्षलाई छ । सबै को धेरै ल्याउन सक्छ अप्रिय क्षण र चिन्ता छ । जुनूनी. कोही प्रतिरक्षा छ भन्ने तथ्यलाई देखि आफ्नो विवाहित हुनेछ बारी मा उतेजना हुनेछ जसले गर्न चाहनुहुन्छ संग तोड उनको पति र संग उनको सम्बन्ध नयाँ प्रेमी छ । यसको छैन आनन्दित अन्त । यो हुन्छ कि एक महिला पात को परिवार को लागि, एक प्रेमी तर, दुर्भाग्य, यो ल्याउन गर्दैन आनन्द । यसबाहेक, निराशा आउँछ । फलस्वरूप, सबैलाई खो दि्छ: महिला जलाइएको छ सबै पुल, र यो. जिम्मेवार व्यक्ति लागि टुक्रिन उनको विगत परिवार महसुस छैन सबै भन्दा राम्रो तरिका, एक नै समय मा, यो बाहिर जान्छ कि, यो जीवन को कम्तीमा तीन मानिसहरूलाई बर्बाद छन् । यस्तो सम्बन्ध अवैध देखि नैतिक दृश्य को बिन्दु । संग सेक्स छ, कसैलाई त यसको सामान्य, तर तपाईं अझै पनि ध्यान मग्न छन् जो केटीहरूलाई साँच्चै अन्य मानिसहरू महिला । छ एक सम्बन्ध एक विवाहित महिला संग एक सूचक, छ को कुल अनादर लागि मानिस, र गर्न नसक्नुको राख्न आफैलाई भित्र केही सीमा छन् । अन्य वस्तुको माझमा, तपाईं नष्ट अन्य मानिसहरू जीवन र दुई मान्छे को विवाह. निस्सन्देह, भने त्यो धोखा छ भने, त्यसपछि सबै कुरा त राम्रो छैन रूपमा यो लाग्न सक्छ. तथापि, सबै नै, सबै भन्दा राम्रो तरिका राख्न एक राम्रो सम्बन्ध छैन जब दुई मान्छे को बारेमा केही थाहा छ, वास्तवमा को धोखा पकडने, र छ जब कुनै धोखा मा सबै. कुनै पनि मामला मा, कसैले बताउन हुनेछ, यो ढिलो होस् वा पछि, बिरालो को बाहिर हो झोला ।
← र नक्शा देखाउँछ जहाँ यी स्लाइडर हो अगाडी
बैठक पहिलो पटक दक्षिण कोरिया - नेदरल्याण्ड - कोरियाली भिडियो अनलाइन डेटिङ →